Raadinta Raadinta Qalabka Leh For Positioning Robotic - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Xaddidan
ByLisa Eitel â € ¢ Raadinta goobaha robotku waxay ku dari karaan dabacsanaanta goobaha wax lagu shaqeeyo, laakiin waa inay ahaadaan kuwo sooman, sax ah, iyo amaan ah si ay u noqdaan kuwo faa'iido leh. Halkaan waxaan ku eegeynaa wadooyinka bixiya.
Nidaamka jagada Robot waa jidka dheer ee bakhaarka, aerospace, iyo xarumaha baabuurta si loogu ogolaado hal robot inuu sameeyo hawlo badan. Waxa kale oo loo yaqaannaa unugyada kala iibsiga robot ama RTUs, naqshadahaan dhaqdhaqaaqa ayaa si isdaba joog ah loogu kulmaa iskuduubka, alwaaxyada waaweyn, iyo qashin-qubka.
Marka la barbardhigo qaababka caadiga ah ee robotu ku daboolan yihiin dabaqa, RTUs waxay u guuraan robots iyada oo loo marayo unugyada shaqada iyo warshadaha waxayna u kala soocaan saldhigyada. Qalabka ugu fiican ee RTUs waa kuwa kaliya ee la dhisay ama kuwa halkaasoo hababka iyo mashiinnada la xidhiidha la isugu dari karo. Halka RTUs ay ku socdaan robot lix-xagal, wadooyinka qadka toosan ayaa mararka qaarkood loo yaqaan 'axis toddobaad' (ama ka yar inta badan, marka robotu lafteedu leedahay toddoba darajo oo xor ah, xaddiga sideedaad). Marka tareenadaasi ay yihiin qayb ka mid ah qaab, oo ay ku jiraan muraayad ay ka soo baxayaan robot, waxay gooyeen.
Mana aha arrin la xidhiidha robotoolka ama moorfudurka, mawduuca fiilada dheeriga ah waa inuu ku daro dhaqdhaqaaqa tarjumaadda. Tani waxay sidoo kale ballaarisaa baqshadda shaqada ama waxay u ogolaataa shaqooyinka gaadiidka gawaarida ama qalabka. Qaar ka mid ah qorsheyaashii, hore waxay u ogolaataa robot in ay ku shaqeeyaan mashiinno kala duwan ama ay ka soo qaadaan jaangooyooyinka, ama mashiinka qaybo waaweyn. Dhanka kale, codsiyada caadiga ah waa xirmeynta, alxanka, goynta wejiga, iyo hawlaha kale ee farsamada.
Halkan waxaan diirada saarnaa fursadaha baabuurta ee RTUs. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in injineeriyadu ay sidoo kale go'aamiyaan inta u dhaxaysa hagayaal iyo jaantusyo (sida badanaa ku jira qaabka raacayaasha kamaradaha ama tusaaleyaalka).